Uganda oo Diyaarado dagaal u soo direyso Soomaliya – news
Uganda oo Diyaarado dagaal u soo direyso Soomaliya
Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo ku joogo magaca AMISOM, kuwaas oo ka kala socdo dalalka Kenya, Ethopia, Burundi, Uganda iyo Djibuti.
Muqdisho, Soomaaliya – Dowladda Uganda ayaa qorsheyneyso in ay dhawaan Soomaaliya u soo dirto diyaarado nooca dagaalka ah, kuwaas oo ka qeyb qaadanaya howlgalka nabad ilaalinta Midowga Africa ee Soomaaliya.
War qoraal ah oo maalinimadii Talaadada ka soo baxay Milateriga dalkaas yaa lagu sheegay in Uganda ay dib eegis u ku sameyneyso howlaheeda ciidan ee Soomaaliya, iyadoona u soo direyso diyaarado dagaal oo howlgalka ka qeyb qaato.
Tirada diyaaradaha ay Uganda u soo direyso Soomaaliya lama sheegin, haseyeeshee Milatriga dalkaas ayaa arintaan rajo wanaagsan ka muujiyay.
Afhayeenka Millateriga Uganda Richard Karemire ayaa sheegay in diyaaradahaas ay taageero weyn siin doonaan Ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya si ay u xoojiyaan howlaha nabad ilaalineed ee ka wadaan gudaha dalka.
Uganda ayaa ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo ku fashilmay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, balse waxaan la ogeyn waxa ay istiraatiijiyadooda dagaal ay ka bedeli doonaan diyaaradaha ay haatan soo direyso Soomaaliya.